Konke mayelana ne-cryptocurrencies: Bitcoin, Ether, Litecoin, .. ICOs, ukuhweba
Konke mayelana ne-cryptocurrencies: Bitcoin, Ether, Litecoin, ...
I-Bitcoin, i-Ether, i-Litecoin, i-Monero, i-Faircoin… sezivele ziyizingxenye ezibalulekile zomlando womnotho wezwe. I-Blockchain, isikhwama semali, Ubufakazi Bomsebenzi, Ubufakazi Bokubambisene, Ubufakazi Bokubambisana, izinkontileka ezihlakaniphile, ukushintshashintsha kwe-athomu , inethiwekhi yombani, Ukuhwebelana, … isilulumagama esisha sobuchwepheshe obusha okuthi, uma singasinaki, sisenze ingxenye yesigaba esisha. yokungakwazi ukufunda nokubhala 4.0.
Kulesi sikhala sihlaziya kahle iqiniso le-cryptocurrencies, sibeka amazwana ezindabeni ezivelele kakhulu futhi sibonisa ngolimi olufinyelelekayo zonke izimfihlo zomhlaba wezezimali ezihlukaniswe, ubuchwepheshe be-block chain kanye nawo wonke amathuba acishe abe angenamkhawulo.
1 Yini iBlockchain?
2 Yini i-cryptocurrency?
3 I-cryptocurrencies eyinhloko
4 Izikhwama noma izikhwama
5 Yini izimayini?
6 Ama-ICO, indlela entsha yokuxhasa ngezimali amaphrojekthi
I-Blockchain noma i-chain of blocks ingenye yobuchwepheshe obuphazamisa kakhulu ekhulwini lama-21.. Umbono ubonakala ulula: isizindalwazi esifanayo esatshalaliswa kunethiwekhi ehlukaniselwe indawo. Kodwa nokho, kuyisisekelo se-paradigm entsha yezomnotho, indlela yokuqinisekisa ukungaguquki kolwazi, ukwenza idatha ethile ifinyeleleke ngendlela evikelekile, ukwenza leyo datha icishe ingabhubhi futhi ikwazi ngisho nokwenza izinkontileka ezihlakaniphile imigomo igcwaliseka ngaphandle kwephutha lomuntu. Vele, futhi ukwenza imali ngentando yeningi ngokuvumela ukudalwa kwama-cryptocurrencies.
I-cryptocurrency iyimali ye-elekthronikhi ukukhishwa kwayo, ukusebenza, ukuthengiselana kanye nokuphepha kuboniswa ngokucacile ngobufakazi be-cryptographic. I-Cryptocurrencies esekelwe kubuchwepheshe be-Blockchain imelela uhlobo olusha lwemali ehlukaniswe okungekho muntu onegunya phezu kwayo futhi ingasetshenziswa njengemali ebesiyazi kuze kube manje ngezinzuzo eziningi. Ama-Cryptocurrencies angathola inani elinikezwa ukuthenjwa ngabasebenzisi, ngokusekelwe ekuhlinzekweni nesidingo, ukusetshenziswa kanye namanani angeziwe omphakathi owasebenzisayo futhi owakha i-ecosystem ebazungezile. Ama-Cryptocurrencies alapha ukuze ahlale futhi abe yingxenye yezimpilo zethu.
I-Bitcoin bekuyi-cryptocurrency yokuqala ukwakhiwa kusuka ku-Blockchain yayo, ngakho-ke, iyaziwa kakhulu. Yathathwa njengendlela yokukhokha kanye nokudlulisa inani okulula ukulisebenzisa, ngokushesha, eliphephile futhi elishibhile. Njengoba ikhodi yayo iwumthombo ovulekile, ingasetshenziswa futhi ilungiswe ukuze udale amanye ama-cryptocurrencies amaningi nezinye izici futhi, ngokuvamile, neminye imibono nezinhloso ezithakazelisayo noma ezingaphansi. I-Litecoin, i-Monero, i-Peercoin, i-Namecoin, i-Ripple, i-Bitcoin Cash, i-Dash, i-Zcash, i-Digibyte, i-Bytecoin, i-Ethereum… ezinye zazo kodwa kunezinkulungwane. Ezinye zixhunywe kumaphrojekthi afuna ukuvelela ahlobene nobuchwepheshe obushintsha indlela esicubungula ngayo ulwazi, idatha kanye nobudlelwano bomphakathi. Kukhona ngisho nalezo ezikhishwe ohulumeni, njengesixazululo okusolwa ukuthi ziyisixazululo sezinkinga zabo zezomnotho, njengePetro ekhishwe uhulumeni waseVenezuela futhi esekela ngezinqolobane zayo zikawoyela, igolide namadayimane. Eminye iwuhlobo lwemali yezinhlangano ezisebenzisanayo zemvelo emelene nonxiwankulu futhi kwakhiwe izinhlelo zezomnotho ezishintshayo ziye kulokho abakubiza ngokuthi inkathi yangemva konxiwankulu, njengeFaircoin. Kodwa kukhona okungaphezu kwemibono yezomnotho mayelana nemali eyimfihlo: izinkundla zokuxhumana eziklomelisa iminikelo engcono kakhulu nge-cryptocurrency yazo, amanethiwekhi okusingathwa kwamafayela ahlukaniswe, izimakethe zezimpahla zedijithali… amathuba cishe awapheli.
Izikhwama noma izikhwama
Ukuze uqale ukusebenzisana nezwe lama-cryptocurrencies, udinga kuphela ucezu oluncane lwesofthiwe, uhlelo lokusebenza olusetshenziselwa ukwamukela nokuthumela lokhu noma leyo cryptocurrency. Izikhwama, izikhwama noma izikhwama ze-electronic zifunde amarekhodi e-Blockchain futhi unqume ukuthi yikuphi okufakiwe kwe-Accounting okuhlobene nokhiye abayimfihlo abakukhombayo. Okusho ukuthi, lezi zinhlelo zokusebenza "ziyazi" ukuthi zingaki izinhlamvu zemali ezingezakho. Ngokuvamile kulula kakhulu ukuzisebenzisa futhi uma izici eziyisisekelo zokusebenza nokuphepha kwazo seziqondwa, ziba ibhange langempela lalabo abazisebenzisayo. Ukwazi ukuthi isikhwama sikagesi sisebenza kanjani kubalulekile ukuze ubhekane nekusasa eselivele likhona.
Izimayini yindlela ama-cryptocurrencies enziwa ngayo. Kungumqondo omusha kodwa ofana nokuthile okufana nezimayini zendabuko. Endabeni ye-Bitcoin, imayelana nokusebenzisa amandla amakhompiyutha ukuxazulula inkinga yezibalo ebangelwa ikhodi. Kufana nokuzama ukuthola igama-mfihlo ngokuzama inhlanganisela yezinhlamvu nezinombolo ngokulandelana. Lapho, ngemva kokusebenza kanzima, uyithola, ibhulokhi idalwe ngezinhlamvu zemali ezintsha. Nakuba kungadingeki ukwazi noma yini mayelana nezimayini ukusebenzisa i-cryptocurrencies, kuwumqondo okufanele uzijwayeze ngawo ukuze ube nesiko le-crypto langempela.
Ama-ICO, indlela entsha yokuxhasa ngezimali amaphrojekthi
I-ICO imele i-Initial Coin Offering. Kuyindlela amaphrojekthi amasha emhlabeni weBlockchain angathola ngayo uxhaso lwezimali. Ukwakhiwa kwamathokheni noma izimali zedijithali ezithengiswayo ukuze kutholwe izinsiza zezimali futhi kuthuthukiswe amaphrojekthi ayinkimbinkimbi kakhulu noma ayinkimbinkimbi kakhulu. Ngaphambi kokuvela kobuchwepheshe beBlockchain, izinkampani bezikwazi ukuzixhasa ngokwezimali ngokukhipha amasheya. Manje cishe wonke umuntu angakhipha eyakhe i-cryptocurrency enethemba lokuthi abantu bazobona amathuba athokozisayo ephrojekthi abafuna ukuyithuthukisa futhi banqume ukutshala imali kuyo ngokuthenga enye. Kuwuhlobo lwe-crowdfunding, i-democratization yezinsiza zezimali. Manje kungaphakathi kwawo wonke umuntu ukuba yingxenye yamaphrojekthi athakazelisayo nakuba, futhi, ngenxa yokungabikho kwemithethonqubo, ama-ICO angasungulwa amaphrojekthi awo awukukhwabanisa okuphelele. Kodwa lokho akusona isithiyo sokuphendulela amehlo akho kolunye uhlangothi; ithuba lokuthola imbuyiselo enhle ngisho nasekutshalweni kwezimali okuncane kakhulu likhona. Kumane kuyindaba yokufunda okwengeziwe mayelana ngamunye wale mibono. Futhi lapha sizokutshela okuthakazelisa kakhulu kuqala.